Ukuthengisa ikhwalithi ephezulu ye-china ipayipi lamanzi elinwebekayo le-hose latex tube
Iyanwebeka: 1: 3 isilinganiso esandayo
Okubalulekile: I-tube yangaphakathi ye-latex ephindwe kabili (46g) ene-5000 * 5000D (3750D * 3750D) yendwangu
Umbala: Okuluhlaza okwesibhakabhaka, oGreen nabanye
Ukupakisha: Ibhokisi lombala elinesikhwama se-opp
I-Outdoor CampMilitary Custom Sleeping Bag Duck Down 800g Gcwalisa isikhwama sokulala sabantu abadala
* Imvilophi yokufihla isikhwama sokulala, ingasetshenziswa ekamu lezempi noma langaphandle.
* Isikhwama sokupakisha nomzimba omkhulu zombili zifana nokufihla, okwenza kube lula kakhulu ukugcina amaphakheji amakhulu.
* Imininingwane eyenziwe ngokwezifiso yokuphrinta yomkhiqizo.
* Umbala wokubukeka nokugcwalisa inani kungenziwa ngezifiso
Abakhiqizi Bamatende Okuzenzekelayo Abaphakeli Abathengayo Bathenga Itende Langaphandle Lamatende
Itende lenza ukusetha ikamu kusheshe futhi kube lula kunakuqala. Leli tende elisheshayo linezigxobo ezifakwe kusengaphambili ezenza ukumisa ikamu kube lula njengokumbuleka, ukunwetshwa, nokuvikeleka. Ungahlanganisa itende cishe ngomzuzu bese uqala ku-adventure yakho